Sydney: Aqoonyahan Cusub Oo Ku Dhawaaqay Inuu Yahay Ugaaska Beelaha Samaroon Kuna Sii Jeeda Borama | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Sydney: Aqoonyahan Cusub Oo Ku Dhawaaqay Inuu Yahay Ugaaska Beelaha Samaroon Kuna Sii Jeeda Borama
Damaciisu waxa uu ku soo beegmayaa xilli timirtii horeba loo dablaayahay”
Sydney-(giriyaadnews)- Warar aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in uu deegaannada Gadabuursiga ku sii jeedo aqoon yahan ugaasnimo sheegtay oo la filayo inuu dhawaan ka anbabixi doona dalka Australia, si uu ugaasnimadiisa ugaga dhawaaqo deegaannada beelaha Samaroon ee geeska Africa.
Aqoonyahankan oo todobaadkan gudihiisii laga warhelay damaciisa ugaasnimada ayaa waxa la sheegayaa in uu rabitaankiisa ku salaynayo mudnaansho uu u cuskanayo curadnimo.
Sida ay warar xog-ogaal ahi sheegayaan aqoonyahankani waxa uu abtirsiin ahaan ka soo jeedaa beesha Reer Ciise (Habar-Cafaan), waxa aanu warkiisu soo baxayaa xilli magaalada Borama xiisad ba`ani ka taagantahay la iskuna maandhaafsanyahay Prof. C/Rashiid Ugaas Doodi oo dhowr biloodba ku sugan magaalada Jigjiga ee dalka Ethiopia, lagana cabsiqabo inuu dib ugu laabto dalka Canada kadib markii la isku diiday ugaasnimadiisa. C/Rashiid waxa uu deganaa dalka Canada muddo ku dhaw 30 sannadood.
Si kastaba ha ahaatee Aqoonyahanka kale ee aan wali la caddayn magiciisa oo la filayo inuu dhowr bilood kadib ka degi doono magaalada Hargaysa ee xarunta Somali Land ayaa waxa uu damaciisu ku soo beegmayaa xilli timirtii horeba loo dablaayahay, oo uu Prof. Cabdi Rashiid-ba yaabbanyahay, lamana garan karo sida ay wax ugu hirgeli doonaan, iyo inay ugaasyo kale oo qurbajoog ahi ka soo daba bixi doonaan iyo inkale.
by giriyaadnews xigasho lughayanews
« Nasashada Booramaonline Iyo Hees Cusub Oo Ay Wada Qaadayaan Ikraan Iyo Cabdi Holland Ee Daawasho Haboon+VIDEO dad waynaha reer djibouti ee borama u soo xagaa baxay oo ka cabanaya qiimaha baabuurta lagu raaco oo kor u kacay dawo vieo »